Fikorontanana teny amin’ny banky Tambajotra nihitsoka no fototr’olana
Trafikana boaderozy sy famotsiam-bola Ho sahy hanenjika ireo tena goavana ve ny fanjakana ?
Tsy azo lavina ny ezaky ny fanjakana amin’ny famongorana ny tsimatimanota. Ny fanondranana boaderozy no aseho amin’izao fa tsy misy ny fandeferana.
Fandidiana an’i ERIC FOU HEHY Mbola mitady vola 301 tapitrisa ariary
Raha efa samy nanantena ny rehetra fa efa tokony ho vita fandidiana i Eric Fou hehy, fito volana taorian’ny nahalasanany tany Inde, hanaovana ilay fanoloana voa dia tsy mbola tanteraka izany hatramin’ny omaly.
Lakandranon’i Mozambika Misy andro ratsy miforona
Araka ny voalazan` ny foibe mpamantatra ny toetr`andro, misy andian-drahona matevina ao amin’ny lakandranon’i Mozambika izay mitondra orana betsaka sy rivotra mahery mety hahatratra 45 km/ora ary mety hihoatra ny 60 km/ora
Seranam-piaramanidina Ivato Tofoka amin’ny kolikoly ny mpandeha
Voaporofo indray ankehitriny ny mahatonga ny olona maro na teratany na vahiny tsy hisafidy ny sidin’ny kaompania Air Madagascar rehefa ho avy na handao an’i Madagasikara.
Herinandron`ny Akoranafo Vidin-tsolika ahazoan’ny rehetra tombony no tanjona
Nifarana tamin’ny faran’ny herinandro teo ny herinandron’ny akoranafo.
Pharmacie Métropole Feno 120 taona katroka
Notanterahina ny tolakandron’ny sabotsy 16 febroary 2019 teo teny amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny famaranana ny fankalazana ny faha-120 taona niorenan’ny Pharmacie Métropole eny Antaninarenina.
ANDOTIANA – maty tany Frantsa Ho avy amin’ny zoma ny nofo mangatsiakany
Higadona an-tanindrazana amin’ny zoma 22 febroary ho avy izao ny nofo mangatsiakan’i Andotiana, ilay tovovavy malagasy very ary hita faty tany Frantsa ny herinandro lasa teo.
Nikorontana tanteraka indray ny ankamaroan’ny banky tamin’ny fandraisan-karama farany teo. Nahitana filaharana lavareny izay nampikaikaika ny maro indray.
Araka ny fanazavana voaray aloha dia ny fihitsohan’ny tambajotram-pifandraisana hatrany no valin-teny nataon’ny tompon’andraikitra. Saika naka vola daholo ny olona tamin’io fotoana io ka nikatso ny solosaina, hoy izy ireo. Ankoatra ny tsy fahampian’ny mpiasa dia nanamafy ihany koa izy ireo ny tsy fahampian’ny vola rehefa fotoana fandraisan-karama. Tsy maharaka ny vola misy ao satria misy maka vola be ka voatery tsy maintsy miandry ny vola hafarana manaraka. Fa nanazava ihany koa ny teny anivon’ny banky fa moramora kokoa raha banky mitovy no anaovana ny fifanakalozana satria eo no ho eo ihany dia mety izany. Raha banky roa samy hafa mantsy no manao ny fandefasana vola na virement dia 72 ora anaty andro fiasana (ouvrables) vao azo raisina ny vola. Raha tany amin’ny masoivoho nanokafana kaonty kosa no andefasana vola dia tonga dia azo raisina satria ao avy hatrany (positionné). Raha any amin’ny masoivoho toerana hafa izay tsy nanokafana ny kaonty no manao fandefasana vola dia tsy maintsy angatahana fahafahana, izany hoe mangataka amin’ilay masoivoho nanokatra ny kaonty aloha vao azo atao ny fandefasana ny vola ka aorian’izay vao afaka misintona. Tokony hojerena haingana ireo olana any amin’ny banky ireo fa tena mandany fotoana sady mandreraka sy mahasorena ny mpanjifa.